चरीकी खुश्बु जस्तै घैँटेकी पनी कोही भइदिएको भए ? ~ FMS News Info
चरीकी खुश्बु जस्तै घैँटेकी पनी कोही भइदिएको भए ?
गत वर्षको श्रावणमा चर्चित डन दिनेश अधिकारी चरी मारीए । बिहिबार चरीकै शैलीमा अर्का डन घैंटेको पनि मृत्यु भयो । दुवै मृत्युलाई इनकाउन्टर पछिको मृत्यु भनिएको छ । मुलुकका कुख्यात गुण्डालाई समात्नु र सजाय दिनु पर्ने ठाउँमा प्रहरीले एक पछि अर्को गर्दै मार्न थालेपछि त्यसलाई मृत्यु भन्ने कि हत्या ? यतिबेला जन जनको प्रश्न बनेको छ । चरी र घैंटे दुबैको मृत्युको शैली एउटै भएपछि यसले मुलुकमा राजनीतिक उतारचढाब ल्याउने निश्चितप्राय नै छ । फरक यत्ति हो चरी एमालेका मान्छे थिए, उनको पक्षमा एमालेले वकालत गरे । घैँटे काँग्रेस भएकाले उनको पक्षमा काँग्रेसका मान्छेले वकालत गर्ने प्रस्ट चित्रहरु बिहिबार बाट नै सामाजिक संजाल तथा टेलीभिजनका बाइटमा दोहोरीन थालीसकेका छन् ।
चरीको मृत्यु पछि मोडेल तथा कथित उनकी प्रमीका भनीएकी खुश्बू ओलीले चरी ‘नर्मल लाइफ’मा फर्कन चाहेको र प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने तयारीमा रहेका बेला मारिएको भन्दै प्रहरी र गृहमन्त्री माथी नै चोर औला ठडाइन् । चरीको र्मत्यु भन्दा पनि खुश्बु र चरीको प्रेमले गर्मागर्मी रुप लियो । हट केक नै बनीन् खुश्बु त्यो समय । तर घैँटेको पक्षमा बोलीदिने त्यस्तै पात्र नभए पनि पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक उथलपुथलले घैँटे प्रकरणले पनी चरी कै शैलीमा संसदमा हंगामा मच्याउने निश्चित छ ।
खैर जे होस् आजका आम जनताको प्रश्न यो हो की प्रहरीले गिरफ्तार गरेर कारवाही चलाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै किन उनीहरुको हत्या गर्‍यो ? मृत्युदण्डलाई संविधानले नै बर्जित गरेका बेला के यसरी व्यक्तिलाई नक्कली मुठभेड सिर्जना गरेर दिन दहाडै मार्न पाइन्छ ? यस्तो गर्ने हो भने नागरिकको जीउधनको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? प्रहरीले गरेको यस्तो कार्यलाई राज्यअपराध किन नभन्ने ? यस्ता प्रश्नहरु यतिबेला एक अर्थमा जायज पनि बनेका छन् ।
तर अकुत सम्पत्ती अबैध रुपमा कमाएर नेतासँग कुम जोडेर एउटै कार्यक्रममा बस्दैमा उनीहरुको सजाय मिनाहा हुन्छ भन्नु पनि कानुनी शासनको उपहास सिवाय केही होइन । र पनि चरी र घैंटेहरुका परिवारका सदस्यहरु त्यस्ता अपवादका पात्र बनेर आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउँदा एक्लो बन्नु परेको भने निश्चित हो । किनकी जिवन भनेको कर्मको फल हो । उनीहरुले जस्तो कर्म गरे उस्तै फल भोगे । परिवारका सदस्यले मानवीयताको हिसाबले चिन्ता गर्नु स्वाभाविकै हो ।www.etajakhabar.com